ခြေဖဝါးဆိုတိုင်းအရေးမကြီးဘူးဆိုပြီး ဂရုမစိုက်တာမျိုးတော့မဖြစ်စေလို…. – BaHuTuTa
1. ခြေထောက်အသားရည်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ Cream တစ်မျိုးမျိုးကိုလိမ်းခြယ်ပေးပါ။
လှတာကိုမက်ပြီးဒုက္ခများတဲ့ ဒေါက်မျိုးကိုစီးတာထက် သက်တောင့်သက်သာနဲ့လွယ်ကူပေါ့ပါးစေတဲ့ဖိနပ်မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီးစီးသင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ခြေထောက်အကြောထုံးတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်မလာစေပဲ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ခြေဖဝါးရော ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းအတွက်ပါသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါတယ်။
အနှိပ်ခံရတာ အကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်တောင် ခြေဖဝါးလေးကို နှိပ်နယ်ခံသင့်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့အကြောတွေဆုံတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဝိတ်တွေကျရောက်တဲ့နေရာမလို့နှိပ်နယ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့ပါးလန်းဆန်းမှုကိုအပြည့်အဝခံစားရမှာပါ။
အထက်ပါပြထားတဲ့လေ့ကျင့် ခန်းလေးကခြေဖဝါးအဆစ်တွေပုံမကျပန်းမကျဖြစ်မှုကိုပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပုံစံမကျတဲ့ခြေဖဝါးတစ်စုံကို သားရေကွင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကများစွာထိရောက်မှုရှိစေပါတယ်။
မကြာခဏဆိုသလို ခြေထောက်ကို အပေါ်သို့မြှောက်ထားပေးခြင်းဟာ ခြေဖဝါးအကြောချင်တွေကို ညောင်းညာမှုမှပြေပျောက်စေရုံသာမကပဲ ခြေသလုံးကိုပါသွယ်တန်းလာစေနိုင်ပါတယ်။
အသားငါးတွေနဲ့အကြော်လှော်တွေကိုသာာအချိန်တိုင်းစားသုံးတတ်တဲ့သူတွေဟာ သူများထက်ပိုပြီးခြေဆီအနံ့ပြင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခြေဖဝါးသန့်ရှင်းကျန်းမာလှပဖို့ဆိုရင် တော့ သင့်တင့်တဲ့အစာမျိုးကိုမျှတအောင်စားဖို့လိုပါတယ်။ တစ်သတ်လုံးအဆီကြော်တွေမစားရဘူး စားတာနဲ့ဖြစ်မယ်တော့မဆိုလိုဘူးနော် ။ ဒါပင်မဲ့တတ်နိုင်သမျှဆီကြော်တွေရှောင်ခြင်းဟာခြေဆီနံ့ကိုသက်သာစေတဲ့အပြင်နောက်ထက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဝိတ်ကိုထိန်းပေးတာကြောင့် ဝိတ်လေးပြီး ခြေဖဝါးပေါ်ပိကာ ခြေဆစ်နာတာမျိုးခြေဖဝါးရောင်တာမျိုးတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခြေဖဝါးဆိုတာတစ်ကိုယ်လုံးကိုထမ်းထားရတဲ့အရာကြီးပါ။ ဒါကြောင့်အပေါ်အောက်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ဟာ Balance ဖြစ်နေဖို့တော့လိုပါတယ်။